म्याकएक्स डिभिडि रिपर प्रो, नि: शुल्क उत्तम डीवीडी रिपिंग प्रोग्राम पाउनुहोस् आईफोन समाचार
म्याकएक्स डिभिडि रिपर प्रो, नि: शुल्क उत्तम डीवीडी रिपिंग प्रोग्राम पाउनुहोस्
पाब्लो अपारीसियो | | धेरै
एक दशक पहिले, हाम्रो बैठक कोठामा लगभग कुनै पनि भिडियो हेर्नको लागि, हामीले यसलाई एक डेस्कटप प्लेयरमा राख्नको लागि सीडी वा डीभीडीमा जलाउनु पर्‍यो। चाँडै पछि, USB पोर्टहरू भएका कम्प्युटरहरू देखा पर्न थाले जसले हामीलाई पेनड्राइभ जडान गर्न र डीभीडी प्रयोग नगरी हाम्रा भिडियोहरू प्रत्यक्ष हेर्न अनुमति दियो। त्यसबेलादेखि यति धेरै पानी परेको छ, तर एउटा कुरा यो परिवर्तन भएको छैन: यदि हामी हाम्रो मूल DVD बाट डेटा निकाल्न चाहन्छौं भने हामीले प्रोग्राम प्रयोग गर्नु पर्छ। म्याकएक्स डिभिडि रिपर प्रो, म्याकोसका लागि उत्तम विकल्पहरू उपलब्ध छन्.
MacX DVD रिपर प्रो हो सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम म्याक मा हाम्रो मूल DVDs रिप गर्न तर, कुनै पनि क्वालिटी सफ्टवेयरको साथ यससँग सानो तिल हुन्छ ।। ..। को मूल्य बनाउनुहोस्। शुभ समाचार यो हो कि हामी केहि महत्वपूर्ण मितिहरू प्रविष्ट गर्दैछौं जहाँ हामी सबै आफ्ना प्रियजनहरूसँग चीजहरू साझा गर्न मन पराउँछौं, र त्यो त्यस्तो चीज हो जुन म्याक्स डीभीडी विकासकर्ताहरूले पनि हामीलाई सम्भावनाको प्रस्ताव गरेर गरिरहेका छन्। १००० नि: शुल्क प्रतिहरू एक दिन उत्तम डीवीडी रिपिंग सफ्टवेयर प्राप्त गर्नुहोस् जनवरी,, २०१ until सम्म। यी प्रतिलिपिहरू र सशुल्क प्रतिलिपिहरू बीच केवल भिन्नता भनेको यो हो हामी तिनीहरूलाई अपडेट गर्न सक्षम हुनेछैनौं.
1 मलाई म्याक्स एक्स डीभीडी रिपर प्रो जस्तो प्रोग्राम किन चाहिन्छ?
2 म्याकएक्स डिभिडि रिपर प्रोले हामीलाई कुनै पनि उपकरणमा हाम्रो डीभीडीहरू हेर्न अनुमति दिन्छ
3 र तेज डीभिडी किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
4 सुविधाहरू MacX DVD रिपर प्रोमा उपलब्ध छन्
5 म्याकएक्स DVD रिपर प्रो कसरी काम गर्दछ
6 म्याकएक्स डिभिडि रिपर प्रो र म्याकएक्स मिडियाट्रान्स नि: शुल्क कसरी प्राप्त गर्ने
मलाई म्याक्स एक्स डीभीडी रिपर प्रो जस्तो प्रोग्राम किन चाहिन्छ?
पहिलो कारण जुन दिमागमा आउँछ सबैभन्दा तर्कसंगत हो: हाम्रो DVD को एक बैकअप प्रतिलिपि बनाउनुहोस्। तपाईं कत्तिको गलत हुनुहुन्छ यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि डीभीडी जीवनको लागि हो। यो प्रमाणित गर्न, म केहि दशक पहिले मलाई भएको केहि संक्षिप्त वर्णन गर्नेछु: वर्षौं पहिले म "ट्र्याकरहरू" भनेर चिनिने अडियो सम्पादकहरूको प्रशंसक थिए। मैले १ songs वटा गीतहरू सिर्जना गरें जुन यो सत्य हो कि ती खासै राम्रो थिएनन्, म सधैँ बचत गर्न चाहान्छु। मैले ती गीतहरू सीडीमा जलाइदिए जुन धेरै डिभिडिज जस्तो छ, र यो सीडीले मलाई बिच्छेदन गर्‍यो (ब्याक्टेरिया? उनीहरूले मलाई भन्यो), जब लेजर केही स्पटहरू मार्फत गयो, तब आवाजले एक प्रकारको एकदमै चिढचिलो हिस बन्द गर्यो। वा यो चिप्पी लाग्यो। मैले गर्न सक्ने पहिलो कुरा मेरो आफ्नै कम्प्युटर थियो कि पिटिएको सीडी पुनः प्राप्त गर्न कोसिस गर्नु थियो। मैले गरे, तर केवल अंशमा: १२ गीतहरू पुनःप्राप्ति गरियो र तीमध्ये धेरै खराब गुणवत्ताको साथ। यदि मैले त्यो सीडीको एक ब्याकअप प्रतिलिपि बनाएको भए, ध्वनि यसको निर्माण पछि २० वर्ष बितिसक्दा उत्तम हुने थियो र धेरै पनि।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, म्याकएक्स डिभिडि रिप्पर प्रोले प्रस्ताव गरेको अर्को कार्य हो मरम्मत डीभीडीहरू। यदि हामीले उनीहरूसँग वर्षौंसम्म राम्रो व्यवहार गरेनौं भने, यो डिभिडहरू कोरिन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जसले मेरो संगीत सीडीमा भिडियोमा पनि मैले भोगेको जस्तै प्रभाव पार्दछ। यस प्रकार्यले मर्मतका लागि डिभिडिजेसन गर्न को लागी कोशिश गर्छ र आउनको लागि भिडियो लाई वर्षौंको लागि उत्तम देखिन्छ।
म्याएक्स डिभिडि रिपर प्रो प्रयोग गर्नको लागि अर्को कारण यो हो ठाउँ बचत गर्नुहोस्। तपाईं मलाई विश्वास गर्नुहुन्न होला, तर वर्षौंदेखि मैले एउटा संगीत समूहको CD / DVD मात्र राखेको छु; मैले बाँकीबाट छुटकारा पाएँ। मलाई अझै पनी याद छ जब मसँग मेरो कोठा र मेरो घरको केही अंशमा दर्जनौं संगीत डिस्कहरू र DVDहरू छरिएका थिए। यी सबै मध्ये सबैभन्दा खराब, मेरो विचारमा, अब डिभिडिको अधिकारमा रहेको खाली ठाउँ छैन, तर तिनीहरूको आनन्द लिनको लागि उनीहरूलाई खोज्नुपर्दछ। यदि हामीले उनीहरूलाई हार्ड ड्राइभमा च्यातिएको छ भने, केवल हाम्रो व्यक्तिगत भिडियो फोल्डरमा हेर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई फेला पार्न फाइन्डरमा खोजी गर्नुहोस्। यदि हामीसँग ती शारीरिक ढाँचामा छन् भने हामी कहाँ खोज्न सक्छौं? म तपाईंलाई झूट बोल्दैछु जब मँ भन्छु कि मेरो भाई छ जससँग सयौं "डिस्क" छन् र केहि चलचित्रहरू खोज्न पागल हुन्छ, यद्यपि म स्वीकार गर्दछु कि जब उसले डीभीडीमा रेकर्ड गरिएका चलचित्रहरू खोज्छ भने धेरै हुन्छन् अधिक
म्याकएक्स डिभिडि रिपर प्रोले हामीलाई कुनै पनि उपकरणमा हाम्रो डीभीडीहरू हेर्न अनुमति दिन्छ
म गनपाउडर पत्ता लगाइरहेको छैन जब म भन्छु कि DVD प्ले गर्नको लागि तपाईंलाई DVD प्लेयर चाहिन्छ। मलाईँ थाहा छैन तपाईको, तर मेरो आईफोनसँग डिभिडिया राख्नको लागि स्लट छैन। केमा यो छ १२GB जीबी स्पेस छ जहाँ म धेरै चलचित्रहरू राख्न सक्छु। म्याकएक्स डिभिडि रिपर प्रो हामीलाई अनुमति दिनेछकुनै पनि मूल वा तपाईंको आफ्नै DVD बाट भिडियो निकाल्नुहोस् र अन्य ढाँचाहरूमा निर्यात गर्नुहोस्, जस बीच कुनै पनि आईफोन खेल्न सक्ने MP4 हो।
त्यहाँ धेरै अन्य अवस्थाहरू छन् जसमा यो जस्तै सफ्टवेयर आवश्यक छ, जस्तै हामीले पहिले नै आइट्यून्समा किन्नु भएको चीज किन्नुपर्दैन यदि हामीसँग पहिले नै मौलिक डीभीडीमा छ भने क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाउँछ वा कम्तिमा पनि सक्षम हुनु हुँदैन। साझेदारी गर्न भिडियोहरू सम्पादन गर्नुहोस् व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि मार्गबाट।
र तेज डीभिडी किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
ठिक छ, म धेरै विचार बिना दुई कारणका बारे सोच्न सक्छु:
क्यालिडाड। हामी अन्य कुनै पनि विकल्पको लागि हेर्न सक्दछौं, तर हामी यसलाई फेला पार्दैनौं। वास्तवमा, हामी इन्टरनेटमा फेला पार्ने कुनै पनि भिडियो पहिले च्यात्थ्यो। यदि हामी क्वालिटी खोज्दै छौं भने, हामी गर्न सक्ने उत्तम डिभिडि रिप गर्नुहोस्।
हामी सबै मेनू र सामग्री बचत गर्दछौं। व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि डाउनलोड गरिएको चलचित्र, जुन हामीले पहिले नै थाहा पाउँदछौं अवैध छ, सामान्यतया हाम्रो हार्ड ड्राइभमा १-२ अडियो ट्र्याकहरू र अर्को भिडियो (२ भिडियो यदि यो थ्रीडी हो भने) को साथ डाउनलोड गरिन्छ, तर अन्य प्रकारका सामग्रीहरू जस्तै मेनुहरू थपिएका छैनन्। यसले हामीलाई एक विशिष्ट अध्याय वा उपशीर्षकहरू र विभिन्न भाषाहरू चयन गर्न अनुमति दिनेछ। छोटकरीमा, यदि हामी यो सबै चाहन्छौं भने, DVD को च्याप्न उत्तम हुन्छ।
सुविधाहरू MacX DVD रिपर प्रोमा उपलब्ध छन्
सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको भिडियो र अडियो ढाँचाहरूमा डीभीडीहरू रिप गर्नुहोस्।
यो सब भन्दा आधुनिक एन्टी-रिपिंग प्रतिबन्ध हटाउन सक्षम छ।
आईभीडी, एन्ड्रोइड, इत्यादिको लागि प्रोफाइल सहित डीभीडीलाई लगभग कुनै पनि ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
गुणस्तर र सबै मूल मेनूहरूको संरक्षण गर्दै डिभिडोलाई आईएसओमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
भिडियोहरू सम्पादन गर्ने सम्भाव्यता, अडियो निकाल्ने वा स्क्रिनसटहरू लिने।
उत्कृष्ट लेखन गति जबकि उच्च गुणवत्ता कायम राख्दै।
म्याकएक्स DVD रिपर प्रो कसरी काम गर्दछ
ल। यो उत्तम प्रोग्राम यसको सक्षमको लागि मात्र राम्रो छैन। त्यहाँ धेरै प्रोग्रामहरू छन् जसले हामीलाई हाम्रो डिभिडिहरू उत्कृष्ट गुणवत्ताको साथ रिप गर्न अनुमति दिन्छ, तर ती सबै यति सहज छैनन् यस पोष्टको मुख्य प्रोग्रामको रूपमा। जटिलता बिना नै रूपान्तरणको लागि, हामी यी चरणहरू अनुसरण गर्नेछौं जुन कार्यक्रमको मुख्य स्क्रीनमा पहिले नै सूचित गरीएको छ:
हामी DVD लोगो मा क्लिक गर्दछौं।
हामी फाँटिएका मार्ग सुरक्षित गर्दछौं जहाँ फाटेका भिडियो सुरक्षित हुनेछन् र हामी त्यसलाई प्रारूप गर्न चाहान्छौं।
हामी RUN मा क्लिक गर्दछौं र रूपान्तरण समाप्त हुन को लागी प्रतिक्षा गर्दछौं।
तपाईं अघिल्लो स्क्रिनशटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, म्याकएक्स डिभिडि रिप्पर प्रो पनि हामीलाई आईएसओ विस्तारको साथ भिडियोहरू प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ। आईएसओ एक्सटेन्सनको साथ फाईलहरू सीडी छवि हुन् र यिनीहरूको नाम राखिएको छ किनकि उनीहरूले सीडी वा डीभीडीमा ठ्याक्कै के प्रतिबिम्बित गर्दछन्। उदाहरण को लागी, जब हामी उबन्टु जस्ता सित्तै अपरेटि system प्रणाली डाउनलोड गर्छौं (प्रत्येक व्यक्ति जसले उनीहरूले मनपराउने अवस्थाको कल्पना गर्छ), हामी के डाउनलोड गर्छौं एक ISO छवि हुनेछ जुन हामी डिभिडिको लागि जलाउन सक्दछौं, यद्यपि यसलाई प्रबन्धन गर्नु उत्तम हुन्छ। प्रोग्रामले हामीलाई USB ड्राइभबाट स्थापना गर्न अनुमति दिँदछ, जस्तै युनेटबुटिन।
यो विकल्प उत्तम छ यदि हामीले विगतमा कुनै आईएसओ एक्सटेन्सनको साथ भिडियो सुरक्षित गरेको छ वा जसलाई हामीले चिनेका कसैले आईएसओ ढाँचामा फिल्म दिन्छ र हामी यसलाई कुनै कम्प्युटरमा प्ले गर्न सकिने ढाँचामा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौं। यसले हामीलाई एक मात्र तरिकाले गर्न अनुमति दिन्छ, त्यो हो, एक मूल डीभीडी लिनुहोस् र आईएसओ छवि को रूपमा बचत गर्नुहोस्। एकपटक सिर्जना भएपछि, हामी म्याकबाट आईएसओ पुन: उत्पादन गर्न सक्दछौं कुनै पनि मिल्दो खेलाडीसँग (त्यहाँ धेरै छैन) यद्यपि यो तर्कसंगत छ कि हामीले त्यो सीडी छविलाई ब्याकअपको रूपमा बचत गर्यौं। जुनसुकै कारणको लागि हामी आईएसओ सिर्जना गर्न वा विघटन गर्न चाहन्छौं, म्याकएक्स डिभिडि रिपर प्रो ले यसलाई संभाल गर्न सक्षम हुनेछ, जबसम्म त्यो सीडी छवि भित्र रहेकोमा भिडियो सामग्री समावेश गर्दछ।
कार्यक्रमले यस बिन्दुमा खुलासा गरिएका भन्दा धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्दछ र त्यसैले यो को लागि सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम को एक मानिन्छ म्याकमा डीभिडी रिप गर्नुहोस्, तर हामीले ती सबैलाई कभर गर्नको लागि अधिक विस्तृत पोस्ट प्रकाशित गर्न आवश्यक पर्दछ।
म्याकएक्स डिभिडि रिपर प्रो र म्याकएक्स मिडियाट्रान्स नि: शुल्क कसरी प्राप्त गर्ने
आउनुहोस् पदोन्नति वेबसाइट। त्यहाँबाट तपाईं म्याक्स डीभीडी रिपर प्रो वा म्याकएक्सको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न भाग लिन सक्नुहुन्छ मिडियाट्रान्स, प्रोग्राम जससँग तपाईं आईओएस उपकरणहरू र म्याकको बिचमा मल्टिमेडिया फाइलहरू ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी संवाद बाकसमा ईमेल राख्छौं। यो वास्तविक ईमेल राख्न लायक छ ताकि तिनीहरूले हामीलाई इजाजतपत्र कुञ्जी पठाउँछन्, जबकि त्यो कुञ्जी विशेष रूपमा मैले डाउनलोड गरेको .zip मा आईपुग्यो।
हामी "लाइसेंस कोड प्राप्त गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्दछौं।
अर्को, हामी «सस्तो संस्करण on मा क्लिक गर्दछौं।
हामी फाईल डाउनलोड गर्छौं जुन तपाईं हामीलाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ।
अघिल्लो चरणमा डाउनलोड गरिएको फाइल अनजिप गर्नुहोस्।
अर्को चरण DMG मा फाईल स्थापना गर्नु हो।
अर्को, हामी MacX DVD रिपर प्रो खोल्छौं। यो परीक्षण संस्करणमा हुनेछ।
अन्तमा, हामी लाइसेन्स कुञ्जी प्रयोग गरेर प्रोग्राम सक्रिय गर्छौं जुन तिनीहरूले zip मा समावेश गरेका छन् जुन हामीले चरण in मा डाउनलोड गरेका छौं। अद्यावधिक गरिएको: पासवर्ड मसँग .zip मा आईपुग्यो, तर केहि प्रयोगकर्ताहरूले दावी गर्दछ कि यो मेलबाट आउनुपर्दछ.
म बिदा भन्न चाहान्दिन तपाईलाई सम्झाइएको बिना कि दिन १ सम्म तपाई म्याक्सएक्स डिभिडि रिपर प्रो को पूर्ण नि: शुल्क पाउन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईं भविष्यको अद्यावधिकहरू स्थापना गर्न सक्षम नहुनुको अपांगबाट विश्वस्त हुनुहुन्न भने, तपाईं सक्नुहुन्छ केवल offer १। .19.95 lifetime को लागि आजीवन अपडेटको साथ हालको प्रस्तावको फाइदा लिनुहोस्, जुन € 30 को बचत भन्दा कम केही छैन। कुनै श .्का बिना, यो कुनै पनि प्रयोगकर्ताको लागि यो उत्तम प्रस्ताव हो जुन यस महान कार्यक्रमको सबै फाइदाहरूको फाइदा लिन चाहन्छन् जुन सबै संग अहिले र भविष्यमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। के तपाईं ती मध्ये एक हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » म्याकएक्स डिभिडि रिपर प्रो, नि: शुल्क उत्तम डीवीडी रिपिंग प्रोग्राम पाउनुहोस्
तपाईले दर्शाए अनुसार परीक्षण संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्, तर डीएमजीमा मैले कुनै सिरियल फाइल पाउँदिन।
टोनीलाई जवाफ दिनुहोस्
इजाजतपत्र कोड ईमेल द्वारा पठाइन्छ।
डेभिडलाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पल आईओएस १.10.1.1..XNUMX.१ मा हस्ताक्षर रोक्दछ
8x15 पोडकास्ट: एयरपडहरू लाइभ परीक्षण गर्दै